व्यायाम गर्नैपर्छ र ? - जीवन शैली - प्रकाशितः चैत्र २८, २०७६ - नारी
व्यायाम गर्नैपर्छ र ?
चैत्र २८, २०७६ कतिपयलाई व्यायाम गर्ने खास तरिका थाहा हुादैन । कसरी व्यायाम गर्ने, के–के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुराको हेक्का हुादैन । कतिपयले व्यायामको आधारभूत तरिका जान्दछन्, तर व्यायाम गर्न जाागर चलाउादैनन् । व्यायाम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कमैले मात्र व्यायाम गर्छन् । त्यसमा पनि नियमित व्यायाम गर्नेको संख्या अझ कम हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा व्यायाम एक अनिवार्य आवस्यकता हो । आरमपूर्ण जीवनशैलीका कारण धेरैजसो दीर्घरोगी भएका छन् । यसबाट छुटकारा पाउन वा यस्तो समस्या आउन नदिनका लागि व्यायाम उपयोगी विधी हो ।
अहिले धेरैजसो होम क्वारेन्टाइनमा छन् । मर्निङ वाक जाने बानी पनि छुटिसकेको छ । घरमा व्यायाम गर्न अल्छी लाग्न सक्छ । त्यसो भए दिनभर निस्क्रिय बस्नु ठीक हुँदैन । यदि व्यायाम गर्न जाागर चल्दैन भने शरीरलाई सक्रिय राख्न सकिन्छ । घरभित्रै बसेर शारीरिक गतिविधि गर्न सकिन्छ ।
खासगरी खानपानका सौखिनहरुले भान्साको काम गर्न सक्छन् । खानेकुरा बनाउने, भाँडावर्तन सफा गर्ने, कुचो लगाउने, सागसब्जी केलाउने । यस्ता गतिविधि गरिरहँदा शरीर सक्रिय हुन्छ । खानेकुरामा मन एकाग्र हुने भएकाले अन्य तनाव पनि हुँदैन । भनिन्छ, भान्सामा काम गर्नु भनेको तनाव भगाउने राम्रो विधी पनि हो । यसैले खानपानमा रुची भएकाहरुले र खाना पकाउने सीप भएकाहरुले भान्सामा यस्तो समय विताउन सक्छन्, जसले शारीरिक गतिविधि त हुन्छ नै मन पनि प्रफुल्ल हुन्छ ।
कतिपयलाई रहर हुन्छ फूलहरु रोप्ने, गोड्ने । नयाा बिरुवाहरु लगाउने । बगैंचाको काम गर्ने । उनीहरुले यस्तै काममा आफुलाई तल्लिन राख्न सक्छन् । बगैंचा बनाउने ठाउँ नभएपनि बोरा, प्लाष्टिक आदिमा माटो र मल राखेर बिरुवा रोप्न सकिन्छ । फूलहरु रोप्न सकिन्छ । बगैंचाको कामले शरीरलाई सक्रिया राख्त, मनलाई शान्त राख्छ । माटो, पानीसँग खेल्नु भनेको स्वास्थ्यका लागि अरु फाइदाजनक पनि मानिन्छ ।
घरको आन्तरिक सजावट
कोही व्यक्ति यस्ता हुन्छन्, जसलाई हस्तकला निर्माणमा औधी रुची हुन्छ । उनीहरु कागज वा प्लाष्टिकबाट नयाँ नयाँ सिर्जना गर्न सक्छन् । त्यसरी तयार हुने हस्तकलालाई घरमा सजाउन सकिन्छ ।
यसरी हस्तकलाको शीप भएका र त्यसमा जाागर चल्नेहरुले घर एवं कोठालाई नयाँ नयाँ साजसज्जामा ढाल्न सक्छन् । यस किसिमको कामले मनलाई आनन्दित बनाउँछ । शारीरिक श्रम पनि हुन्छ ।
वालबच्चा वा घरपालुवा जनवारसँग खेल्ने
कतिपय व्यक्ति बालबच्चासँग खेल्न झर्को मान्छन् । तर, कतिपय भने बालबच्चासँग निकै रमाउछन् । भनिन्छ, बालबच्चाका लागि हामी पनि बालबच्चा नै बन्नुपर्छ । उनीहरुसँग मिलेर खेल्नुपर्छ । यसरी बालबच्चासँग खेलिरहँदा रमाइलो हुने मात्र होइन, शारीरिक व्यायाम पनि राम्ररी हुन्छ ।
यद्यपि बालबच्चासँग मोवाइल, ल्यापटप आदिमा खेल्ने बानी गर्नु ठिक हुन्न । उनीहरुलाई शारीरिक खेलमा अभ्यस्त बनाउनुपर्छ । आफुपनि त्यसमा सामेल हुनुपर्छ । साथै घरपालुवा जनवार छ भने तिनीहरुसाग खेल्ने, रमाउने गर्न सकिन्छ । यसरी पनि शारीरिक रुपमा सक्रिय रहन सकिन्छ ।
वैशाख १२, २०७७ - मोटोपना र व्यायाम
मंसिर ३०, २०७६ - घरमै एरोबिक्स
मंसिर ३०, २०७६ - घरमै हेल्थ क्लब
कार्तिक २४, २०७६ - मधुमेह के हो ?
श्रावण २७, २०७६ - रक्तचापमा व्यायाम